30 Qaababka Ubaxa Bilaashka ah. Abuurista khadka tooska ah
Haddii aad raadineysay qaabab halkaasoo ubaxyadu ay yihiin halyeeyada, waad joojin kartaa raadinta maxaa yeelay maanta waxaan kuu keenay isku soo duub qaar ka mid ah qaababka ubaxa asal ahaan iyo qurux ahaanba waxaan soo arkay muddooyinkii ugu dambeeyay.
In kastoo qaar ka mid ahi umuuqdaan xoogaa "taayir", qaabab ubax ama sidii loogu yaqaanay, the ubax daabacan, ayaa lahaa welina haysta maanta dhagaystayaal aad u ballaaran oo diyaar u ah inay iibsadaan naqshadaha labadaba daabac iyo daabacaadda dharka.
Qaabkan qaababkani wuxuu umuuqdaa mid lagu dhajiyay nooc gaar ah oo kamid ah dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ama macmiilka, sida dumarka ka weyn 40 sano qiyaastii sanadihii ugu dambeeyay, laakiin waayadan dambe waxay noqdeen kuwa moodada markale waxaanan arki karnaa dad da 'kasta leh oo dhar xidhan oo leh daabacado ubax leh iyo naqshado daabacan oo leh kufsasho ubax.
Haddii aad rabto inaad kala soo baxdo qaababka ubaxa, ka gal maqaalka asalka ah cinwaanka aan kaga tagayo xagga hoose.
Xigasho | Qaababka ubaxa
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Maamulayaasha » 30 qaabab ubax oo bilaash ah
18 burush indhaha macquul ah